Siddeed Qodob Oo Laga Soo Saaray Shirkii Beelaha Garxajis | Gacanlibaaxnews
Siddeed Qodob Oo Laga Soo Saaray Shirkii Beelaha Garxajis
Gacanlibaax (GLN): Shirkii beelaha Garxajis ee siddeeda maalmood ka socday buurta Gacanlibaax, oo maanta la soo gabagabeeyey is la markaa na laga soo saaray siddeed qodob oo go’aan ah.
Warmurtiyeedka laga soo saaray gunaanadka shirka ee xanbaarsanaa qodobada go’aanka ah, ayaa u dhignaa sidan:
“Ugu horreyn shir weynaha Beelaha Garxajis ujeedadiisu mahaa in Qaranimada Somaliland lagu dumiyo ee waa in Qaranimada Somaliland ee majarihii toosnaa laga duwey lagu toosiyo, laguna suuliyo cadaaladad darrada badheedhka ah ee lagu kala gudbiyey laguna kala qaybiyey beelihii reer Somaliland ee walaalaha ahaa ee Dalka iyo Dowladnimadu ka dhaxaysay.
8. Bulshada reer Somaliland ee nabadda jecel waxay markhaati ka yihiin in dagaalka labada sano ka saconayay deegaanka Ceel-Aweyn ilaa haddana socda ee u dhexeeya labada beelood ee Walaalaha ah aanay dhex ka ahayn Dawladda Somaliland ee maanta jirta iyo dawladdii ka horraysay midkoodna. Sidaa awgeeda Beelweynta Garxajis waxay baaq nabadeed u diraysaa labada beelood ee dirirtu ka dhaxayso ee walaalaha ah iyaga oo leh ‘CAQLIGIINU HA GARTO DHIBAATADA GURYIHIINA TAALA’ . Madaxweynahana waxaanu ku adkaynaynaa inuu ku dhiirrado soo af-jarista si degdega colaaddaa, isagoo adeegsanaya awoodda dawladnnimo, caddaalad iyo inuu wax ka qabto dembiilayaasha dagaalkaas hurinaya ee isugu jira gacan ku dhiigleyaal iyo siyaasiyiinta xukuumaddiisa ka tirsan, si ay u fududaato in la isugu yimaaddo wada hadal nabadeed xalna loo gaadho, loogana badbaado in dagaalkaasi deegaano kale ku fido.”